Manchester United oo dib u soo celisay xiisaha ay u qabto saxiixa xidig ka tirsan Barcelona – Gool FM
Manchester United oo dib u soo celisay xiisaha ay u qabto saxiixa xidig ka tirsan Barcelona
(England) 28 Maarso 2019. Wargeyska “Daily Star” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Manchester United ay dib u soo cusbooneysiisay xiisaha ay u qabto saxiixa daafaca reer France iyo kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti.
Inkastoo ay adag tahay in Barcelona ay ogolaato in xiligan uu ka dhaqaaqo safkeeda Samuel Umtiti, hadana Manchester United ayaa muujisay sida ay kaga go’antahay inay sameyso saxiixa daafaca reer France, kadib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo aadan.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in kooxda Manchester United ay dooneyso inay iska xoojiso dhanka daafaca, waxayna xulashada koowaad ka dhiganayaan saxiixa Samuel Umtiti, kaasoo ay sidoo kale bar-tilmaameed ka dhiganayeen xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Wararka ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in Barcelona aysan u ogolaan doonin in daafaca reer France ee Samuel Umtiti uu u dhaqaaqo kooxda Manchester United ilaa iyo hadii ay dhacdo hal arin mooyee, taasoo ah inay dhameystirto saxiixa daafaca reer Holand iyo kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in Manchester United ay laba dhibaato kala kulmi doonto saxiixa Samuel Umtiti, tan koowaad ayaa ah sida ay ku ogaal lahayd kooxda Barcelona bixitaankiisa, halka dhibaatada labaad ay tahay dhaawacyada joogtada ah ee dhanka jilibka kasoo gaaray daafaca reer France tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkan.
“Waxaan wali ku leeyahay kooxda Inter saaxiibo iyo xusuus aad u fiican” - Philippe Coutinho